Inka badan 300 Qoys oo loo qeybiyay Baco ay Roobka isaga difaacaan (SAWIRRO) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Inka badan 300 Qoys oo loo qeybiyay Baco ay Roobka isaga difaacaan...
Inka badan 300 Qoys oo loo qeybiyay Baco ay Roobka isaga difaacaan (SAWIRRO)
Maamulka degaanka Garasbaaley ayaa maanta 300 oo Qoys siiyay Baco ay isaga difaacaan Roobabka, oo la saadaalinayo in maalmaha soo socda ay ka Da’i doonaan dalka, iyo in ay Oraxda maalinkii galaaan.
Dadkan oo deeqda loogu qeybinayay xarunta degaanka Garasbaaley ayaa waxaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Garasbaaley C/raxmaan Axmed Cali (Garyare), Ku-xigeenkiisa Cali Xasan Cali, Guddoomiyaha arrimaha bulshada C/laahi iyo xubno kale.
Dadkan maanta deeqda loo qeybiyay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii uu saameeyay Roobabkii saacadihii la soo dhaafay ka Da’ay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.
Gudoomiyaha degaanka Garasbaaley C/raxmaan Axmed Cali (Garyare) ayaa sheegay deeqdan in ay ka timid maamulka gobolka Banaadir iyo mid ka mid ah Hay’adaha gargaarka. wuxuuna u mahadceliyay dhammaan dadka ka qeyb qaadanaya u gargaarida dadkan danta ya.
“Waxaan ku jirnaa xilli roobaadka, dadkan waa dadkii habeen hore uu saameeyay Roobka, waxaa u soo gurmaday maamulka gobolka Banaadir iyo Hay’ado kala duwan, ka maamul ahaan waxaan wadnaa dadaal, dadkan way dhiban yihiin musqulihii qaarkood way ka dumeen, waxaan soo marnay Hal Dollar dalkaaga ku dhiso, waxaan taaganahay Hal Dollar dadkaaga ku afuri,” Ayuu yiri Gudoomiyaha Garasbaaley.
Gudoomiyaha degaanka Garasbaaley C/raxmaan Axmed Cali (Garyare) oo kormeeray xeryaha barakacayaasha ayaa sheegay in Saddex caruur ah ay ku geeryoodeen Roobabkii Da’ay, kuwaasi oo u adkeysan dabeysha iyo biyaha Roobka.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxa uu Deeq lacageed siiyay laba caruur ah oo ku gubtay Dab iyo Nin Oday oo ka xanuunsanaya xubinta Taranka, isaga oo sheegay in ay heli doonaan gargaar caafimaad oo deg deg ah.